Gunyana 13, 2018 arun
BitGo anogamuchira pamutemo mvumo muchitokisi crypto midziyo
Crypto kuchengeteka startup BitGo vakagamuchira mvumo muna US kuti ave anokwanisa zvirambe zviripo nokuda digitaalinen zvinhu. BitGo Trust anzverwa ne South Dakota Division pamusoro Banking, zvichireva unogona ikozvino kupa zvechechi nemakasitoma munhu yaidzorwa chekuchengeta mhinduro kuti digitaalinen zvinhu, akati mukuru zvaidiwa uye zviri pamutemo mukuru Shahla Ali.
“pari zvino … tinopa paIndaneti inopisa chikwama mhinduro, rinowanikwa kuti munhu nokudhanilodha software yedu uye kuchengeta zvavo mari. Nesuwo chipiriso custodial mhinduro iri mubatanidzwa inopisa uye kutonhora chikwama… Tariro yedu ndiko kuvaka papuratifomu izvi, kuti zvechokwadi varatidzirei regulators uye vatengi kuti muenzaniso uyu anogona kushanda uye tinogona here kuvaka guru kuvimba kambani kuti vasaite zvinhu.” BitGo ndehwokuti kuumba yakachengeteka ega chipiriso kuti chombo kuti vasaona vanoita nehurumende vomuno kuti cryptocurrencies rinogona zvinokosha mapoka aya. “Taiziva vaizopiwa zvakanakisisa akashanda kuburikidza zvirambe zviripo akanga zvachose nezvezvandaifanira zvavo zvinhu” akati.
Mt. Gox kwakaita yemakambani chikwereti ikozvino anogona ikwidzwe kutaura Bitcoin refunds
The muvimbwi yacho-refu defunct Bitcoin Exchange Mt. Gox akazivisa kuti yemakambani vakweretesi vanogona zvino kupinda dzinofunga kuti nzwara shure parumananzombe Bitcoin kubudikidza vachangobva mvumo vapore kwacho. Nobuaki Kobayashi, Gweta-pa-mutemo uye rokuchinjwa muvimbwi nokuda Mt. Gox akati yokusunungurwa neChitatu kuti vaimbova vanoshandisa chepamusoro ari Exchange vachava kusvikira Oct. 22 ikwidzwe uchapupu kutsigira kwavo kutaura refunds ose crypto zvinhu dzaidzidziswa exchange.
“Tava akasunungura paIndaneti vapore vanoti pakunamata hurongwa … izvo zvinoita yemakambani vanoshandisa ikwidzwe uchapupu avo vanoti nokuda paIndaneti nzira chokuita yevagari vapore zvekufamba,” Kobayashi akati. Kusunungurwa kunotevera yapfuura nhau kuti Mt. Gox zvaJehovha paIndaneti pakunamata maitiro akanga akazarurwa kusvika munhu (asiri chepamusoro) vanoshandisa musi Aug. 23Rd 2018. pari zvino, January rechi24, 2019 ndiyo inotevera (Zvinotarisirwa) Zuva dare apo muvimbwi chisarudzo kuchaita kana mvumo kana kurambwa ne Tokyo dare, naizvozvo zvose zviri pasi kuchinja remangwana.
Blockchain aigona zvinowedzera wezvokutengeserana mari ne $ 1T
Blockchain anogona zadza zhinji $1.5 tiririyoni emadhora wedzerai-kudiwa mukaha mumarudzi pose zvokutengeserana mari kuburikidza easing mari nokuda diki- uye svikiro kadikidiki mabhizimisi munyika zvichiitika misika, tsvakurudzo itsva anoti. Anorenda kuitwa uye vasunungurwa neWorld Economic Forum uye Bain & kambani, zvokutsvakurudza rinoratidza, kubudikidza deploying blockchain, mabhizimisi munyika yose inogona vaunze nemamwe $1 tiririyoni zvarakanakira mari izvozvo zvimwe uchashayikwa pamusoro.
Maererano imwe Asian Development Bank kukarukureta, munyika yose kutengeswa mari pakakoromoka pari panguva $1.5 tiririyoni uye vanofungidzirwa kuti akure $2.4 tiririyoni ne 2025. Kutsvakurudza zvimwe anotsanangura kuti nyaya iyi zvikuru chinovapo kubva dzisina kuwana zvikwereti uye zvikwereti nokuda SMEs vari kutarisa richikura mabhizimisi avo, sezvo zvakaparadzira network vanokwanisa kugoverana zvebhizimisi mhiri zvemari masangano pamwe romugove cheni uye muuye pachena kuti mabhizimisi’ kutendeseka. “Vangadai kubatsira kuderedza chikwereti pangozi, yakaderera mari uye kubvisa zvipingamupinyi kuti kutengeserana,” vaongorori kunyora.
Crypto Exchange OKCoin anowedzera kuti 20 zvimwe US ​​inoti
Patova anenge rimwe gore kubva rimwe nyika guru cryptocurrency exchanges rakamanikidzwa kuvhara masuo aro panogasa hurumende-rinorambidzwa wokutengesera kurambidzwa. ikozvino, kuti adzikinure, anga China anotsanangura OKCoin, ari eying kwakatangazve iri mhiri pose. Zvino makuru San Francisco, OKCoin raMwari U.S. nhungirwa akazivisa neChitatu kuti akagamuchira pamutemo mvumo richikura kupinda 20 itsva inoti, kuwedzera zvikuru ayo kuwana kupinda rimwe munyika misika kupfuura crypto.
"Kuti cryptocurrency pamusika kusvika zvizere kwadzo, exchanges kufanana OKCoin kushanda pamwe yaivapo uye zvitsva regulators kuti convertible rakapotsa mari, digitaalinen zvinhu, uye / kana kuchengetedzeka,"Said Tim Buyn, exchange worunhare wacho CEO. "Chikwata chedu unomushandira nesimba mukati akaoma chaizvo US pamutemo zveupfumi. Tine kufara kutora danho guru iri mberi sezvo tinovavarira kuputsa miganhu kutadzisa yose zvechokwadi-digital twa musika apo nokuomerera refu yakasimbiswa mirayiro. "Kare, OKCoin USA akanga chete azarurirwa vatengesi mu California, kwayakanga akakwezva kumativi $700,000 MUBHUKU daily, chepamusoro nayo pamusoro 125th pakati exchanges pose, pa CoinMarketCap.
Kraken Daily Market Mushumo 12.09.2018
$136M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Gumiguru 30, 2018 pa 1:25 AM